Kufambira mberi kwe mold uye tekinoroji iri kukurumidza. Tekinoroji nyowani, zvishandiso zvitsva, uye kuumbwa kutsva zvakafambisa zvimiro zvitsva uye zvigadzirwa zvitsva zvemold. Hunhu hwekutyaira tekinoroji huri pachena. Indasitiri yekuumbwa yachinja kubva pakutevera kuenda padanho idzva rekutevera uye paralle...
1. Ongorora chigadzirwa chekuumba maitiro, mold chimiro uye nzira yekugadzira. Ita shuwa kuti hupenyu hwepurasitiki chair mold inodarika miriyoni nguva. 2. Izvo zvinodiwa kugadzira yakazara epurasitiki chair mold chimiro uye zvikamu zvekugadzirisa, uye kuisa mberi gungano zvinodiwa uye jekiseni ...
Wall Plastic Flower Pot Mold
Kune akawanda maumbirwo ehari dzemaruva dzepurasitiki dzakaiswa pamadziro, dzinogona kukamurwa kuita denderedzwa, mativi mana, uye ovhari. Mabhodhoro emaruva epurasitiki anogona kudiridzwa kakawanda, uye ane mvura iri nani. Vanhu vazhinji zvino vanosarudza mabhodhoro emaruva epurasitiki ekudyara zvirimwa zvehari. Kune akawanda-akaiswa madziro epurasitiki maruva ...
Logistics Fruit Basket Mold Kugadzirisa
Upenyu hwechakuvhuvhu zvinoreva nguva kubva pakutanga kwekutongwa kusvika pakukweshwa kwechakuvhu. Muiyo Logistics fruit basket mold dhizaini dhizaini, zvinodikanwa kujekesa rudzi rwekugadzira batch kana huwandu hwese hwezvikamu zvekugadzira mold iyo mold inokodzera. Under normal cir...
Vana matoyi ekuchengetera bhokisi mold kugadzirisa uye kugadzira
Yevana yekuchengetera matoyi bhokisi kugadzira uye kugadzira Aojie mold kugadzira kwemakore gumi nemashanu zvakanakira Aojie Mold mukugadzira mabhokisi ekuchengetera matoyi evana. Mold maitiro: kurongeka kugamuchirwa → kudhirowa wongororo → dhizaini yekuumbwa → kugadzirira zvinhu → kuongorora →...
Kugadziriswa kwemota yekuchengetedza bhokisi mold
Izvo zvinodiwa zvehunyanzvi ndezvizvi: 1. Ongorora maitiro ekugadzira chigadzirwa, chimiro chemota yekuchengetedza bhokisi mold uye maitiro ekugadzira. Ita shuwa kuti hupenyu hwe mold hunoenderana nezvinodiwa nevatengi. 2. Dhizaina yakazara mold chimiro uye kugadzirisa zvikamu zvesto...
Ndeapi matambudziko anofanirwa kutariswa mukuita kwekugadzira mold?
1. Ukobvu hwemadziro hunofanira kunge hwakafanana sezvinobvira, uye dhizaini yekona inofanira kunge yakakura. 2. Chikamu chekushandura chinofanira kunge chiri zvishoma nezvishoma uye chakatsetseka. 3. Gedhi. Mumhanyi anofanira kunge akafara sezvinobvira, akakora uye mupfupi, uye chinzvimbo chegedhi chinofanira kugadzikwa zvinoenderana nekupfupisa maitiro ekugadzirisa, ...
Ndezvipi zvinoumba jekiseni mold?
Iyo mold inoumbwa ne mold inofambiswa uye yakagadziriswa mold. Iyo mold inofambiswa inoiswa pane inofambiswa template yemuchina wekuumba jekiseni, uye iyo yakagadziriswa mold inoiswa pane yakagadziriswa template yemuchina wekuumba jekiseni. Gating system Iyo gating system inoreva chikamu chemumhanyi...
Ndeapi nheyo dzekusarudzwa kwegedhi chinzvimbo chepurasitiki mold
Nzvimbo yegedhi ine simba guru pane deformation yejekiseni yakaumbwa chikamu uye inobata zvakananga pahutano hwejekiseni yakaumbwa chikamu. Kusarudzwa kwakashata kwenzvimbo yegedhi kuchakonzera deformation yejekiseni yakaumbwa chikamu uye zvimwe zvakawanda zvinokanganisa. Sarudzo ye...
Ndezvipi zvinodikanwa zvepurasitiki mbishi zvinhu zvekupisa mumhanyi jekiseni rekuumba?
Muchidimbu, chero dhizaini yekuumbwa yakasanganiswa nekuita kwezvikamu zvepurasitiki, dzinenge dzese thermoplastics dzinogona kuumbwa neanopisa mumhanyi jekiseni rekugadzira, asi parizvino inonyanya kushandiswa mukupisa mumhanyi jekiseni rekugadzira polyethylene, polypropylene, polystyrene, Polyacrylonitrile, ...
Ndeapi misimboti uye hunhu hwekupisa mumhanyi jekiseni kuumba?
Hot mumhanyi jekiseni mold inonziwo runnerless jekiseni mold. Musiyano uripo pakati pekudururira kwayo uye yakajairwa yekudurura sisitimu ndeyekuti panguva yese yekugadzira, ipurasitiki mune yekudurura system inogara iri muyakanyungudutswa, uye kurasikirwa kwekumanikidzwa panguva yejekiseni kudiki, ...
Maitiro ekugadzira akaomesesa molds emota inokotama pombi?
1. Isa kuchengetedzwa uye nyore kwekugadzirwa (kugadzirisa / kusangana / jekiseni molding) kutanga. "Mutengi ndiMwari" hachisi chinangwa cheindasitiri yebasa chete, asiwo chinangwa chedu. Pakuumba jekiseni, kuenzanisa ndicho chinhu chekutanga, uye kurerutsira ndekwechipiri. 2. Tevera mutengi ...
123456 Next > >> Peji 1/7